Wasiir Oomaar oo beeniyay warar harqiyay baraha bulshada Soomaalida - Latest News Updates
Wasiir Oomaar oo beeniyay warar harqiyay baraha bulshada Soomaalida
Madaxda Soomaalliyeed ee haya hoggaanka Dowladda dhexe ee Federaalka iyo maamul goboleedyada waxay maalmahaan qaati ka taagan yihiin bulshada, iyadoo ay sii kordheyso dacaayadaha iyo wararka been abuurka ah ee lagu faafinayo baraha sida aadka ah ay u isticmaalaan Soomaalida sida Facebook-ga.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duuliista Hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa si kulul u beeniyay warar lagu faafiyay baraha bulshada ay ku xiriirto ee Internet-ka, isagoona sheegay in wararkaasi aanay waxba ka jirin haba yaraatee.
Wasiir Oomaar waa la xiray ayaa meelaha ku arkayay , oo maxaa la ii xirayaa yaan dambi ka galay?” ayuu isweydiiyay Wasiir Oomaar oo sheegay in arrimahaasi ay ka dambeeyaan kooxo isaga ka doonaya lacago baad ah.
Maxamed Cabdullaahi Oomaar ayaa sheegay in haba yaraatee aanay waxba ka jirin wararka musuqmaasuqa ah ee Wasaaradiisa laga sheegay, isagoona tilmaamay inuu howlihiisa si caadi ah u wato, taasi oo uu sheegay inaysan waxba u dhimeynin dacaayadaha rasiita ah ee laga faafinayo.
Waxa uu kula taliyay kooxaha sidaas ku doonaya inay dhaqaale ku helaan inay raadsadaan howlo ay si xalaal ah ugu helayaan waxa ay doonayaan, hase yeeshee eedeymaha loo soo jeediyay Wasiir Oomaar ayaa ku soo beegmaya xilli Wasaaradiisu ku tallaabsatay horumar ay ka gaartay howlaha duulista iyo hawada.